Caasha Geelle: “Haweenka Puntland waxay ku qayb iyo qoondo waayeen qallinka ragga” (dhegayso) – Radio Daljir
Caasha Geelle: “Haweenka Puntland waxay ku qayb iyo qoondo waayeen qallinka ragga” (dhegayso)
Febraayo 18, 2019 1:29 b 0
Caasho Geelle Diiriye oo ah wasiirkii hore ee hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland, ka horna soo noqotay mudane Baarlamaan oo isla Puntland ah, ayaa si durugsan uga hadashay saamihalka haweenka Puntland ee golayaasha dawladda heer dawlad dhexe, heer gobol iyo mid degmaba.
Caasho Geelle, oo wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siisay Radio Daljir, ayaa tilmaantay heerka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Puntland iyo saamihelkooduba in uu yahay mid aad u hoooseeya, ayna sal u yihiin sababo dhawr ah oo is biirsaday, kuwaasi oo ay ugu miisaanweyn tahay ragga iyo wax isla raadintooda oo ku kooban naftooda, markastana horraysiisa wiilka marka ay timaaddo xil isku dhiibidda dawladeed.
“Ma jiro sharci dhigan oo meelyaalla oo muujinaya saamiga haweenka ee siyaasadda iyo arrimaha kale ee bulshada, mana jirto siyaasad cad ah oo meelaynaysa qoondo haweenka Puntland ay leeyihiin oo lama dhaafaan ah, mana jirto ahmiyad siin laga arko madaxda siyaasadda ee ragga ah” ayey tiri Caasho Geelle. Waana sababta maanta haweenku uga maranyihiin Baarlamaanka Puntland, xukuumaddana ay uga yihiin wax aan dhaamin marnaan.
Caasho, waxay noogu sheegtay wareysiga ay siisay Radio Daljir, wasaaradda hormarinta haweenka ee Puntland oo ahayd mid loo asaasay matalaadda haweenka iyo koboceeda dhaqan dhaqaale, siyaasad iyo hormarinba, in faham khaldan laga qaatay, loona arkay meel haweenku hobsho-hobsheeyaan, loona daayey haweenka oo kaliya, misna laga weeciyey ahdaaftii loo unkayba.
Hadalkaan Caasho Geelle Diiriye ayaa imaanaya iyadoo maalin uun ka hor Baarlamaanka Puntland ay meelmariyeen xukuumadda cusub ee Puntland oo ka kooban 48 xubnood oo iskugu jira wasiirro, wasiirro kuxigeenno iyo wasiiru dawlayaal, kuwaasoo hal wasiir oo haween ahi ay ku jirto, inkasta oo ay jiraan dhawr xubnood oo wasiirro kuxigeenna ah oo haweenka ah, kana mid ah xukuumadda cusub ee Puntland.
Dhinaca kale Baarlamaanka Puntland, ayaa isna kalkaan ah markii tirada haweenku ay ugu hoosaysay tan iyo asaaskii Puntland ee sannadkii 1998-dii, waxaana Baarlamaanka Puntland ee hadda jira haween ka ah hal gabar oo kaliya, taasoo laga soo xulay gobolka Sool.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 427 Wararka 14796
Cabdiweli Seed Cilmi, Wasiir KX W Xannaanada Xoolaha Puntland: “Harqaanlaan soo noqday waana ku faanaa shaqooyinkii aan soo qabtay” (dhegayso)